Rivaldo Oo Sheegay In Neymar Jr Uu Ka Shalaynayo Qaladkii Uu Barcelona Kaga Baxay Balse Ay Wali Qoyskiisu Diidan Yihiin. - Gool24.Net
Halyaygii hore ee kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Brazil ee Rivaldo ayaa sheegay in Neymar Jr uu ka shalaynayo qaladkii uu ku lahaa in uu Barcelona ka baxay balse ayna wali qoyskiisu qiranayn.
Neymar Jr ayaa lacag rekoodh aduun ahayd oo 222 milyan yuro ah waxa uu ugu biiray kooxda PSG sanadkii 2017 kii laakiin tan iyo maalintii uu Camp Nou ka baxay waxaa dhulka ku soo dhacday sumcadii uu kubbada cagta ku lahaa.
Neymar Jr ayaa la soo kulmay dhacdooyin tiro badan oo si xun u dilay waayihiisii ciyaareed ee la filayay in uu ku noqonayo xidiga aduunka ugu fiican wuxuuna hadda is arkayaa isaga oo da’yarka reer France ee Kylian Mbappe kaga saamayn batay horyaalka France.
Neymar Jr ayaa koob kasta oo heerka kooxaha ah kula soo guulaystay Barcelona wuxuuna kaalinta saddexaad ka galay abaal marinta Ballon d’Or balse waxa uu sanadkii ugu danbeeyay awoodi waayay in uu tobanka xidig ee ugu sareeya ku soo baxo.
Rivaldo oo ka hadlaya in wali qoyska Neymar ay qiran laayihiin qaladkii uu wiilkoodu sameeyay balse uu isagu ogyahay ayaa yidhi: “Haddii aad Neymar la hadasho, aabihii ama qoyskiisa, waxay kuu sheegayaan in aanu isagu ka murugaysnayn, laakiin waxaan filayaa in uu ka murugaysan yahay”.
“Barcelona waa Barcelona, Neymar-na waa ciyaartoy heerka kooxda ah” ayuu Revaldo hadalkiisa sii raaciyay.
Laakiin markii Revaldo la waydiiyay in uu doonayo in uu arko Neymar Jr oo ku soo laabanaya Barcelona ayuu ku jawaabay: “Anigu ma ogi haddii ay u fiican tahay ama ayna u fiicnayn Barcelona. Laakiin waa cadaan in uu isagu qalad sameeyay in uu baxay”.
Neymar Jr ayaa dhawaan ka soo qayb gali waayay xafladii abaal marinaha horyaalka France ee Ligue oo uu Kylian Mbappe ku guulaystay xidigii ugu fiicnaa.